Izibonelelo eziphezulu ze-5 zokusebenzisa i-Ostarine MK-2866 powder | AASraw
Izibonelelo eziphezulu ze-5 zokusebenzisa i-Ostarine MK-2866 powder
/Blog/MK-2866/Izibonelelo eziphezulu ze-5 zokusebenzisa i-Ostarine MK-2866 powder
ezaposwa ngomhla 04 / 28 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo MK-2866. Ibe 1 Comment.
Yonke into malunga ne-MK-2866 powder
1.Yintoni i-Ostarine MK-2866 powder?
2.Yintoni i-Ostarine MK-2866 powder?
3. I-Ostarine MK-2866 powder isebenza njani?
4.Iziphumo ze-Ostarine MK-2866 powder
5.Ostarine MK-2866 i powder
6.Top 5 Iinzuzo zokusebenzisa i-Ostarine MK-2866 powder
7.Usebenzisa njani i-Ostarine MK-2866 powder?
8.Iziphumo ze-Ostarine MK-2866 powder
I-9.Ostarine I-MK-2866 yePowder Reviews
10. Izinzuzo zokuthenga i-Ostarine MK-2866 powder powder evela kwi-AAS
I-Ostarine (MK2866 powder) ividiyo ye powder
I-Raw Ostarine (MK2866) Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-Ostarine (MK2866) ipowder
I-molecular Formula: C19H10D4F3N3O3
Isisindo somzimba: 393.35
Melt Point: 70 ku-74 ° C
I-Ostarine MK-2866 powder nguModulator Receptor Modulator (i-SARM CAS) 1202044-20-9). Yayenziwe yinkampani yezobisi ebizwa ngokuba yi-GTX ukunceda abantu ukuba balwe neemeko zokutshabalalisa imisipha. Ifezekisa umphumo wokugqibela ngokubopha i-androgen receptors yakho ngendlela efanayo neprohormones okanye i-anabolic steroids.
Kukho i-hormone ekhethiweyo kunye nama-receptors enoba isetyenziswe ngokucokisekileyo kunye ngokuchanekileyo kunokukunceda kwisakhiwo esifanelekileyo seesistim kunye nokutshisa kweoli. Umngeni omkhulu kunamhlanje amadoda amaninzi idiphozithi engafunekiyo kodwa engenakukhunjulwa. Iqala ukungaqapheli kwaye kungekudala iba yingozi enkulu.
Amanqatha amaninzi afaka kwi-tummy, okhalweni, amathanga, iingalo, amahlombe kunye nesifuba unenkani kwaye ufuna iimpatho ezizodwa zokuzilahla. Phakathi kweendlela ezininzi ezikhoyo, siza kujonga i-Ostarine. Oku kuthathwa njengenye ye-SARM enamandla kunye neyosebenzayo (i-Andrégen Receptor Modulator ekhethiweyo). Mhlawumbi ayizange incede nje kwi-chisel kwaye ihlakulele imisipha ephakamileyo kodwa iphinde iyanceda ekugqibeleni loo mafutha enenkani enamalungu athile omzimba.
Isebenza ngokujolisa i-androgen receptors ezitholakala kwithambo kunye nezihlunu ngaphandle kokuchaphazela ezinye izitho zomzimba wakho. Ngaphezu koko, ayiyi kuguqulwa ibe ngama-hormone angafunekiyo ongayilindela kwi-steroids. Awuyi kunika nayiphi na impembelelo ecaleni kakhulu.
igama: I-Ostarine (i-MK-2866 powder) ipowder
3.Kwenzeka njani I-Ostarine MK-2866 i powder isebenza?
I-Ostarine i-Ostarine i-MK-2866 ipowder yenzelwe ukunyuka kwincinci. Ngelixa unesisongezelelo, unokulindela ukuzuza okubonakalayo kunzima. Ukongeza, uya kuba namandla ngakumbi kwaye uya kuziva usebenza kwaye unamandla. Uya kuba nokunyamezela. Ukuba unentlungu edibeneyo, uya kuziva ungcono. Le mveliso inamakhono okuphulukana ngokuhlanganyela. Kuya kunceda ekulahlekeni kwesisindo, ukuhlaziywa, kunye nokukhwabanisa.
Yenzelwe ukubopha kwi-androgen receptor. Ibonisa i-bone kunye ne-muscular ability to select. Ukuvuselela kunye nokudibanisa kuya kwandisa intuthuko yeprotheni eya kubangela ukukhula komzimba.
Ukusebenza akuyi kuhluka kwi-steroids. Kuya kubangela ukukhula kwemisipha kufana ne-steroids. Kodwa umahluko kukuba awuyi kunika nayiphi na imiphumo emibi enokuyifumana kwi-anabolic steroids. Ungatsho ukuthi i-ostarine (i-MK-2866 powder) ikhuselekile kwaye inika umphumo wendalo ngaphandle kokuchaphazela amaninzi amaninzi kunye nezinye izitho zomzimba wakho.
Isebenzisa iziphumo ze-anabolic kwiisisu zakho zomzimba. Olu buchule lwenza kube lukhetho olufanelekileyo ukuphatha imisipha yokuchitha izifo. Ukongezelela ukuphilisa, kuyasebenza kakhulu ukwakha imisipha. Kucingelwa ukuba kulungile kubadlali bomzimba, abagijimi kunye nabani na abanomdla kwisakhiwo semisipha. Kwakhona isebenza njenge-arhente ekunciphiseni ukuguqulwa ngexesha lokubuyiswa kwenkqubo ukusuka nasiphi na utyando olunzulu okanye nayiphi enye imeko efanayo. Kuqinisekiswe ngokwesayensi.
I-GTx yenzile uphando oluninzi kunye nokulinga kwalo mveliso ngaphambi kokungenisa kwimarike. Luye lwaqhuba iinyanga ezine ezine-IIb kunye nezigulane ze-159. Bonke baye babonisa umehluko omkhulu. Baye baxhotyiswa ngokupheleleyo xa beqhathaniswa nezinye izongezo kunye neendlela.
Xa kuziwa kwisakhiwo somzimba, abasebenzisi bafumene luncedo gqitha njengoko kunceda ukuphucula ubunzima bemisipha yomzimba kunye nokuba namandla omzimba. Imveliso ixabiswa kakhulu ngabasebenzisi bezakhiwo zomzimba kunye nokunyamezela.
I-Ostarine MK-2866 powder ingasetyenziselwa ukuzuza kunye nokugcina ubunzima besisipha. Kuba umdlali, oku kuthetha ukuba inokusetyenziswa kwizigaba zombini zokusika nokukhupha. Umsebenzisi unokulindela ukuzuza okubonakalayo kumzimba omzimba ongenamandla ngaphandle kokufunwa kwamanzi okungafunekiyo okanye ukwesaba i-gynecomastia edlalwa rhoqo ne-anabolic steroids. Umntu uya kuzuza ngokungenakunzima kangangokuba wayeya kumjikelezo Dianabol or Anadrol; Nangona kunjalo, ukuzuza kuya kuhlambulula kwaye kulula ukugcina ukusetyenziswa kwithuba. Kuqhelekile ukuba umntu adibanise yonke inzuzo yokuzinyameka ngeenzuzo ezilungileyo xa usebenzisa ii-steroids ezithile, kodwa iimali ezixhambileyo ze-muscle ziphela zibala.
I-Ostarine MK-2866 powder ingaba luncedo kakhulu ngexesha lokusika okanye lokutya. Oku kungaba yithuba elifanelekileyo lokusebenzisa i-CAS ye-SAR 1202044-20-9 ngenxa yomzimba wayo okhusela iimpawu. Ukuze ulahlekelwe ngamafutha omzimba, kufuneka utshise iikhalori ezingaphezulu kunokuba uzidle. Ukuba kwintsilelo yekhalori kubeka ubunzima obubuthakathaka besichengeni, kukho ukulahleka okuthile. Ukuba siyakwazi ukukhusela ubunzima bethu besisondlo ngexesha lokutya, asibheki kangcono nje ukuba siqhubeka sitshisa amafutha. Ukulahleka kwemisipha yomzimba kuya kuphazamisa umonakalo owenza ukulahlekelwa kwexabiso elibi kunzima. Khusela umsila we-muscle kwaye ukhusela imetabolism. I-Ostarine iya kunika nokuphilisa kunye nokulungiswa okuhlangeneyo, okubaluleke kakhulu xa kutywala. I-Harsh okanye ukutya ngokukhawuleza kunokukhokelela ekunxileni. Ukuba siyakwazi ukukhusela amajoyina ethu, kunye nokwandisa i-tendon kunye ne-ligament amandla, ukuhlanganiswa kwe-collagen kunye nokuphucula umthamo wamaminerali, siyaqhubeka nokuqeqesha nokuqeqesha. Imiphumo ye-MK-2866 powder Ngale ndlela sinenzuzo ngokwenene kwisigaba sokubamba okanye ukusika, kodwa ngokuqhelekileyo baya kuvela ngakumbi ngexesha lokusika. Imiphumo ye-Ostarine kule nkalo ichanekileyo idatha ibonise ukuba iyakhathaza ngokukhawuleza ukulimala, kungekhona imeko yokuxubha nje ngeentlungu zentlungu kodwa ukuphilisa kwamalungu, i-ligaments, i-tendon kunye nethambo.
5.I-Ostarine MK-2866 i powder
I-MK-2866 powder yi-CAS ye-SARM elawulwa ngomlomo 1202044-20-9. Ngeenjongo zokulondolozwa kwemisipha ngexesha lokutya, ubuncinane be-15mg ngemini ngokuqhelekileyo kuthatha. Ukuze ukukhula kuqhutywe, abaninzi abasebenzisi baya kufumana i-20-25mg ngosuku ukuba yindawo efanelekileyo yokuqala. Abanye abantu abanzima kunokuba bafumane i-30mg ngosuku, kodwa ininzi idatha ibonisa ukuba amanqanaba amaninzi awenza amanani amaninzi ngokuthelekiswa namacandelo e-20-25mg kumadoda amaninzi. Ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo kuya kugcina iiveki ze-6-8 ngeeveki ze-4 ezingekho kweSARM xa umjikelezo we-Ostarine ugqibile. Nangona ukunciphisa i-testosterone kungeke kube nzima, i-PCT inakho okanye ayimfuneko. Nangona kunjalo, ukunyanzelwa kwamanye kuya kuba khona kwaye kukulungele ukunika umzimba ithuba lokumisa. I-MK 2866 inomyinge wobomi malunga neeyure ze-24; kwimihla yokutsala kwansuku kwanele. Akukho nzuzo kumayeza amaninzi ngosuku.
6.Xho 5 Iinzuzo zokusebenzisa i-Ostarine MK-2866 powder
IXHUMA UKUKHULUZA AMAMCULO OMSEBENZI
Ngaba ukwandisa ubunzima besisundu sakho injongo? Ukuba impendulo nguweewe, unesizathu esininzi sokuzama umgangatho we-MK-2866 powder supplements. Ziye zabonakaliswa ukuba zisebenza ngokuphumelelayo ekunyuseni ubunzima besisindo somzimba. Oku kwenzekile kungekhona kuphela kubagijimi nabakhi bomzimba kodwa ezininzi izigulane zomhlaza ziye zazuza kuyo. Oku mhlawumbi ngenxa yokuba i-Ostarine (i-MK-2866 powder) ithathwa ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo emzimbeni. Iyakwazi ukuhamba ngokukhawuleza kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba.
Kusebenza ngokukhawuleza kwaye unokulindela ukufumana iziphumo ezintle kakhulu kwixesha elifutshane. Kukho esinye isizathu sokuba kutheni i-MK-2866 i-powder supplement isicatshulwa kakhulu kwizinye iindlela zokwakha izistim ze-steroid. Kukhuselekile kwaye akuyiyo nemiphumo emibi engxaki enkulu eninzi nezinye izixazululo ezisekelwe kwi-steroid.
KUNCEDA UKUNCEDA UKUTHUTHUKISWA KWEZINTO
Ukuba ungumdlali okanye umakhi womzimba, impumelelo yakho iya kuxhomekeka kumgangatho omkhulu wemisipha kunye namandla okufanayo. Le mveliso ifunyenwe ibe yinto efanelekileyo kubadlali kunye nabakhi bomzimba kunye nabo bafuna ukujonga kakuhle.
Ngoko ke ukuba unobungozi bokuzivocavoca unesizathu esininzi sokuzama le mveliso. Ngaphandle kokunceda ukwakha ubunzima besistim kuya kunceda izihlunu zibe namandla. Ngenxa yoko, uya kuba kwindawo engcono kakhulu ukwenza kakuhle kwibala lakho lezemidlalo. Kubabenge-athlete, kunokuba luncedo ekubeni neemisipha ezingabonakali kakuhle kodwa zinegunya elifunekayo lokwenza imisebenzi enzima.
KUNCEDA UKUNCEDA INKQUBO YOKUPHILA
Njengomgijimi, umakhi womzimba okanye nokuba ngumzimba wokukhubazeka, kufuneka uxhomekeke kakhulu kumsebenzi wokusebenza, owathi ngamanye amaxesha unokuba nzima kwaye unzima. Ngokuqhelekileyo unokuphelisa ukulimala ngokukhawuleza xa iseshoni yoqeqesho iphelile. Ukuba unomncintiswano ozayo, okanye nokuba ungathanda ukudibana nentombi yakho, le nzakala ingaba yinkxalabo yangempela. Kwiimeko ezinjalo, unokujika kwi-Ostarine kwaye ine-rekhodi yembonakaliso ngokukhawulezisa inkqubo yokuphulukisa ixhalabele. Kukho uphando lokubonisa oku.
Iimpembelelo ze-SAR kwimpembelelo yokuphulukisa ziyamangalisa kakhulu ngoogqirha kunye neengcali zempilo. Ku luncedo kakhulu xa kuthethwa ukuphatha i-tendon kunye nokulimala kwethambo.
KUNYE UKUTHUTHUKISA UKUPHUMA
Ewe, sonke sithanda ukunyamezela. Enoba ngumsebenzi wethu wosuku okanye ukwenza njengomdlali, ukunyamezela kuyinto ebalulekileyo yokuphumelela. Ukuba unqwenela ukufikelela kwiinjongo zokufaneleka kwimpilo kufuneka ucingisise ngokuthatha i-Ostarine (i-MK-2866 powder) kwisilinganiso esifanelekileyo. Umlinganiselo ophakanyisiweyo ngu-12.5 mg kwiiveki ezine. Kuye kwaboniswa ukuba ukuba unamathela kule mlingo uya kuba nokwandisa ukunyamezela kwakho. Oku kudibaniswa nokunyuka kwesisundu kunye nokuphucula amandla omzimba kungaba nesisombululo esipheleleyo nesipheleleyo ukuba ungumqhubi okanye nokuba ngumzimba wokukhubazeka.
IT KUNCEDA UKUBA UKUKHUMANA NOKUPHATHWA KWE-OSTEOPOROSIS
Ngenxa yobudala kunye nezinye izinto, amawaka kuthi ahlupheke kwiimeko ezibizwa ngokuba yi-osteoporosis. Ikhokelela ekutheni amathambo abe buthathaka kwaye aphephe. Oku kunokukhokelela ekuveleni nakwezinye iingozi zethambo eziqhelekileyo. Abantu abanjalo banokuzuza xa bebekwe kwisilinganisi esilawulwayo se-MK-2866 powder. Kuyaziwa ukuqinisa amathambo kakuhle kwaye kunokukunceda nokwakhiwa kwamathambo angamahlombe. Abo bafumana iintlungu ziyakwazi ukunceda ngenxa yokuba kunokukhawulezisa inkqubo yokuphulukisa kakhulu. Oku kungenxa yezinto ezizodwa zokuphilisa kunye nezixhobo zokwakha izihlunu.
Ukuze uzuze imisipha okanye ukukhwabanisa, isilinganiselo esicetywayo ngu-25 mg. Uya kufuneka uthathe i-25 mg imihla ngemihla kwiiveki ezine ukuya ezintandathu. Uza kubona ukuhluka kwiveki yokuqala ngokwayo. Ngenxa yesiphumo esihle, kufuneka uqaphele ukuba ulandele ixesha kunye namayeza. Ukuba ufuna, ungathatha umthamo ophezulu we-36mg. Unokuphinde uqhubeke iiveki ezisibhozo. Kodwa uya kuvunyelwa kule dosi nexesha xa ulinganisela i-210lbs. I-PCT ayimfuneko kwi dose evamile. Kodwa ukuba uthabatha umthamo ophezulu, i-PCT iyimfuneko.
Njengazo zonke i-SARs ezisetyenziselwa ukwakha imisipha, i-Ostarine ixhaphake kakhulu kwizinto ezingasetyenziselwa yona. Ibonise ubuninzi bexesha ngexesha lokusika. Kanye kunye nokusika, kuye kwaboniswa ukuba kusebenze kakuhle ngexesha lokubuya, kuncedisa ukufumana ubunzima obuyinyameko, kunye nezinye iindleko zokulahlekelwa kwintlawulo yeoli. Ubuninzi bunokwenzeka kwi-MK-2866 powder, kodwa kunconywa ukuba usebenzise i-LGD-4033 endaweni yokuba ucinga ngokucubungula.
I-Ostarine (i-MK-2866 powder) isebenza kakuhle ngokubuyiselwa ngenxa yeziphumo zokwahlula izondlo. Ikhalori iyadingeka ukwakha izihlunu eziya kunceda ekulahlekeni kwesisindo kwaye ziya kukhulisa amandla omzimba kunye nobukhulu. I-dose ephakanyisiweyo yokubuyisela kwakhona i-13 kwi-25 mg. Kuya kufuneka uqhubeke nokuqhubeka kwiiveki ezine ukuya kweebhozo. Ukongeza, kufuneka ulandele ukutya okunesondlo kwiprotheyini ukuze uzuze ubuninzi.
Iimpawu eziphambili zokusika
Kwakhona kunceda ukusika xa ulondolozo lweengcambu ze-muscle. Kuya kunciphisa iikhalori ngexesha elifanayo. I-dose ephakanyisiweyo ngu-13 kwi-5 mg. Unako ukufumana uncedo lweeveki ezine ukuya ezintandathu.
Kucingelwa ukuba kulungile ukukhawulezisa ukubuyiswa kokulimala, ingakumbi i-tendon kunye nokulimala okunxulumene namathambo. I-dose ephakanyisiweyo ngu-12.5 mg.
Xa uthatha i-Ostarine?
Unokuthatha amanyathelo okucetyiswa kanye kuphela ngosuku ukuze ufumane izibonelelo.
I-Ostarine ayikhululekile nakweliphi na umphumo wecala. Unokuvavanywa uvavanyo olulingqongileyo oluvaliweyo ngenkathi uthatha i-Ostarine. Kodwa kuya kuba yesikhashana. Xa uyeka ukuwuthatha, awuyi kuba namava anjalo. I-Ostarine iza neenzuzo ezininzi ngaphandle kokunika nayiphi na impembelelo yecala. Ukuba ukhangele ukukhuseleka okukhuselekileyo nokusebenzayo ngokukhula komzimba kunye nokwakha umzimba, unokuqwalasela ukuthatha i-Ostarine. Kuqinisekiswe ngokwesayensi. Ngoko ke, unokuthembela ngokuthembeka kwe-Ostarine.
The iziphumo ezibi ze-Ostarine MK-2866 powder zilinganiselwe njengoko zibonakala ziba nefuthe elichaphazelekayo eliyingozi. Uninzi lweempembelelo ezinxulumene ne-anabolic steroids aziyi kuba khona nale SARM; Nangona kunjalo, abanye baya kuthi, nangona banobulali.
I-Estrogenic: Iziphumo ezichaphazelekayo ze-Ostarine akufanele zibandakanye ezo ze-estrogenic njenge-SARM CAS 1202044-20-9 aromatize. Akukho ukuguqulwa kwe testosterone kwi-estrogen ehambelana nale nkunkuma. Ukugcinwa kwamanzi, ukucima, i-gynecomastia okanye uxinzelelo oluphezulu lwegazi ngenxa yokugcinwa kwamanzi akunakwenzeka. Nangona kunjalo, idatha ibonisa ukuba ezinye ukwanda kwe-estrogen esele ikhona, kodwa kufuneka ibe mnene kakhulu kwaye ayanele ngokwanele ukusetyenziswa kwe-anti-estrogen. Ukuba ukunyuka kancinci kakhulu kukubhekiselele, ukuba i-anti-estrogen isetyenziselwa, ungasula phantsi amanqanaba akho e-estrogen, enokubangela ukungalingani kwe-hormone kunye nemiphumo ehambelanayo.
I-Androgenic: I-Androgenic nemiphumela yecala ye-Ostarine, nangona ichaphazela ngqo i-androgen receptor ayifanele ibe khona. Eli qela aliguquli kwi-DHT; I-acne kunye nokulahleka kweenwele akunakwenzeka. Imiphumo yeAndrogenic eneempembelelo ezinxulumene nokulungiswa kwamabhinqa ayinakwenzeka. Njengoko akukho msebenzi othe ngqo kunye ne-androgenic ehambelana ne-DHT, imiba yeprotate kufuneka ibe yinto engekhoyo.
I-Cardiovascular: Imiphumo emibi ye-Ostarine ifanele ibe neengozi ezincinci zengqondo. Zomgangatho we-HDL kunye ne-LDL zingancitshiswa, kodwa yonke idatha ibonisa ubuncinci ukuba kuncitshiswa kakhulu.
Ukunciphisa iTesttosterone: Idlalwa ukuba i-SARM ayiyi kuphelisa ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo, kwaye yinyaniso ayiyi kuqhathaniswa ne-anabolic steroids. Nangona kunjalo, ukunyanzelwa komnye kunokwenzeka, kodwa ukupheliswa okupheleleyo akunjalo. Ukongezwa kwe-testosterone-yokunyusa ingavunyelwa ngelixa usebenzisa iMK-2866 powder. Idatha ye-Post Cycle Therapy (PCT) yinto engacaciseki ukuba ngaba kuyadingeka. Abanye abantu babonakala befumana amanqanaba amakhulu okunciphisa i-testosterone kunabanye.
I-hepatotoxicity: Nangona ilawulwa ngomlomo, iziphumo zecala le-Ostarine azibandakanyi ukutywala kwesibindi. I-MK-2866 powder ayikho kwiC17-alpha alkylated (C17-aa) kwiklasi yeziyobisi njengamaninzi omlomo we-anabolic steroids. Ayifaki i-MI metabolite ehambelana nayo SARM S4 onika loo SARM ethile imisebenzi ethile.
9.I-Ostarine i-Ostarine MK-2866 Iimpendulo zePowder
I-MK-2866 powder yinyango ephumelelayo yokubonelela ngokunyusa okukhulu kwe-anabolic. Ukuphononongwa ngabanye abantu abaxhomekeke kwi-intanethi baxutywe kunye nokuhlaziywa kwezinto ezimbi ezibonakalayo zisekelwe ekungaqondeni. Le CAS yeSARM 1202044-20-9 ayiyi kupakisha kwi-30lbs yesisindo kwimiba yeeveki efana ne-steroid Anadrol iya kuthi, kwaye ayiyi kunika inqanaba lobunzima obufana ne-Trenbolone kunye ne-Masteron. Ukuze siyiqonde nayiphina imithi esetyenziselwa iinjongo ze-anabolic, kufuneka siqale siqonde oko kukwaziyo noko kungenjalo. I-Ostarine ingaba yindlela echanekileyo ngaphezu kwe-anabolic steroids, ibhuloho enhle phakathi kwemijikelezo ye-steroid (ecinga ukuba awunakhathazeka ngokufumana uhlaziyo olupheleleyo lwe-hormone ngelo xesha), okanye ukongeza okulungileyo kwi-stack yezinye izinto. Kufuneka uqwalasele nalapho ufumana khona umkhiqizo. Uninzi lwezinto ezizithengiweyo ziya kwenziwa kwiinkampani zeekhemikhali zophando, kwaye kukho ezinye izinto ezivelisa umveliso ongezantsi. Nangona kunjalo, ngeemveliso eziphezulu zeemveliso kwiimarike, abaninzi balahlwempu bahlala behlala kwishishini ixesha elide.
10.Izinzuzo uthenge i-Ostarine MK-2866 powder powder kwi-AAS Ostarine MK-2866 umphakeli we powder powder:
Yonke into omele uyiqonde ngaphambi kokuthenga i-Clenbuterol powder Thenga i-S4 (i-Andarine) I-Powder Online | Yonke into ofuna ukuyifumana
tags: bathenge i-MK-2866 powder, I-MK-2866 powder, I-MK-2866 powder yokuthengisa, Abaphakeli be-powder MK-2866
Mirco10 / 17 / 2018 kwi-5: 54
Ukusebenzisa i-XMUMX e di ostarine?
Yiluphi na umlomo?
I-spedizione che tasso di successo ha?
I-Sarms AC-262356 Powder: All You Want To Know	Ukuhlaziywa kwe-Smart Drug Noopept powder, iiNzuzo, iMilinganiselo kunye neempembelelo zecala